Firmware, ny nofy ratsy Fizarana 4: Fifaninanana fitsentsenana akoho | Avy amin'ny Linux
Ny ampahany amin'ny ahiahy amin'ny faniriana ny kernel hitantana ny boot azo antoka amin'ny ambaratonga ambany dia satria ny lakilen'ny Microsoft dia azo ampiasaina hanenjehana ny rafitra, ary raha mitranga izany dia matahotra izy ireo sao tsy hanajanonan'i Microsoft ny lakile ka noho izany Linux PC. avelao izy ireo hihazakazaka miaraka amin'io lakile io (ary tsy misy maniry izany).
Nanomboka tamin'ny fangatahana fisintomana avy tamin'i David Howells izay namela ny lakilen'ny binary vita sonia an'ny Microsoft hampidirina ao anaty kernel mihazakazaka amin'ny mode boot azo antoka. Ilay nanana lamba firakotra dia nihevitra fa volombava ary tsara kokoa ny manatsara ny parser X.509. Namaly i Matthew Garrett fa iray ihany ny fahefana manao sonia ary manasonia ny binary bin (PE azo tanterahina) fotsiny. Ary eto dia namela ny lelany maranitra i Linus ary nilaza hoe:
Ry zalahy, tsy fifaninanana fitsentsenana akoho ity. Raha te-handinika ireo binary bin PE ianao dia tohizo. Raha te-hanontany anao i Red Hat lalina any an-tenda amin'i Microsoft, olanao * io. Tsy misy ifandraisany amin'ny kernel izay tazomiko. Zava-poana ho anao ny fanananao milina fanaovana sonia izay handamina ny binary binary, hanamarina ny sonia, ary hanasonia ny lakileny vokariny amin'ny fanalahidiny manokana. Izy ireo dia efa nanoratra ny kaody, nataon'Andriamanitra, ao anatin'io filaharana io. Fa maninona aho no hikarakara? Fa maninona ny kernel no tokony hanome azy toy ny "binaries PE ihany no soniavintsika"? Manohana ny X.509 izahay, izay fenitra fanaovan-tsonia. Ataovy amin'ny ilan'ny mpampiasa amin'ny milina azo itokisana. Tsy misy fialan-tsiny hanaovana izany ao anaty kernel.
Namaly i Matthew:
Ireo mpivarotra dia te-hitondra fanalahidy nosoniavin'ny antoko fahatelo atokisana. Ankehitriny ny hany mandrefy dia ny Microsoft, satria toa ny hany zavatra tian'ireo mpivarotra mihoatra ny rindrambaiko crappy dia ny manaraka ny famaritan'i Microsoft. Ny mitovy aminy dia tsy Red Hat (na inona na inona) manasonia ireo fanalahidy ireo amin'ny fomba fandaharam-pianarana, fa manasonia indray ireo lakile ireo miaraka amin'ny lakile azo antoka avy amin'ny kernel upstream. Vonona ny hitondra fanalahidy azo antoka ve ianao raha misy mpikambana ao amin'ny fiarahamonina atokisana mandray serivisy fanaovana sonia indray? Sa heverintsika fa izay te handefa modely ivelany dia dondrona ary mendrika ho fadiranovana?
Namaly i Linus fa miahiahy ny amin'ny olona tsy miraharaha izy. Fa efa hadalana ny manao sonia modely misy kernel miaraka amin'ny lakilen'ny Microsoft. Ho fanampin'izany Red Hat, dia sonia ny modely mimari-droa NVIDIA sy AMD. Nilaza i Peter Jones tsia, fa ny Red Hat dia tsy hanao sonia modely naorin'olon-kafa. Nanampy i Garret fa ny RHEL dia hiantehitra amin'ny fanalahidy avy amin'ny NVIDIA sy AMD ary azo inoana fa hiorina amin'ny serivisy fanaovana sonia an'i Microsoft izy ireo.
Ary eo no miato kely aho ary mamintina amin'ny ampahany sy mahery setra ho an'ireo izay tsy te-hiditra amin'ny antsipiriany ara-teknika:
Nanjary adala daholo ny fampandrosoana rehetra manodidina ny boot azo antoka, saingy satria ireo mpivarotra fitaovana (ny lehibe indrindra farafahakeliny) dia mbola maniry ny hampiditra lalina an'i Microsoft.
Ka dia nanapa-kevitra ny hanao ireto sosokevitra manaraka ireto i Linus, ka najanon'izy ireo ny filokana ……:
Hetezo amin'ny fangarony.
Ity no soso-kevitro ary miorina amin'ny SAFETY MARINA ary ao Apetraho aloha ny mpampiasa fa tsy ny fomba fiheviny "andao hanaram-po amin'ny Microsoft amin'ny fanaovana crap".
Ka raha tokony hankasitraka an'i Microsoft isika dia andao jerena ny fomba ahafahantsika manampy filaminana tokoa:
- distro dia tsy maintsy manao sonia ny maodeliny ARY TSY MISY INDRINDRA default. Ary tsy tokony hamela modely hafa mihitsy hanafatra ny toerana misy anao koa, satria maninona no tokony hasiana fika? Ary inona no ifandraisan'ny orinasa Microsoft amin'ny zavatra hafa?
- alohan'ny hametrahana modules an'ny antoko fahatelo hafa dia alao antoka angataho alalana amin'ny mpampiasa. Ao amin'ny console. Tsy mampiasa fanalahidy. Tsy misy an'izany. Ho simbaina ny lakile. Miezaha mametra ny simba, fa ny tena zava-dehibe, avelao ny mpampiasa hifehy.
- Mampitahiry zavatra toy ny lakilen'ny kisendrasendra isaky ny mpampiantrano - miaraka amin'ny maso tsy misy saina UEFI kilemaina raha ilaina. Saika azo antoka izy ireo fa ho azo antoka kokoa ka hiantehitra amin'ny fakany fahatokisana adala miorina amin'ny orinasa lehibe, miaraka amin'ny manampahefana manao sonia izay matoky olona amin'ny carte de crédit. Miezaha mampianatra an'ireo zavatra ireo amin'ny olona. Amporisiho ny olona hanao ny lakileny (kisendrasendra) manokana ary ampidiro ao amin'ny toe-javatra UEFI (na tsia: ny zava-drehetra momba ny UEFI dia mifehy kokoa noho ny fiarovana), ary miezaha hanao zavatra toy ny sonia indray mandeha miaraka amin'ny lakile nariana manokana. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia andramo ny hamelomana an'io karazana fiarovana io toa ny "ataontsika izay anontanian'ny mpampiasa mazava tsara amin'ny fampitandremana lehibe ary hamorona lakileny manokana ho an'io modely manokana io." Fiarovana tena izy fa tsy filaminana "fehezinay ny mpampiasa."
Azo antoka fa hampiasain'ny mpampiasa azy io koa. Tian'izy ireo ny mampiditra ny maody mimari-droa NVIDIA sy ireo banga rehetra ireo. Fa avelao izany SU fanapahan-kevitra, ary eo ambany SU mifehy, fa tsy hilaza an'izao tontolo izao ny fomba tokony hitahian'i Microsoft azy.
Satria tsy tokony ho momba ny tsodrano MS izany, fa ny mpampiasa mitahy ny modely an'ny kernel.
Raha ny marina dia ianao no atahoran'ireo olona manohitra ny fanalahidy. Amidinao ny shitware "fanaraha-maso fa tsy fiarovana". Ny "MS manana ny masininao" rehetra dia ny fomba tsy mety amin'ny fampiasana teny miafina.
Nanomboka teo dia nilamina ny kofehy ... ary tsy mendrika ny fanarahana azy.
Naman'ny DesdeLinux. Androany aho mankalaza ny tsingerintaona voalohany naha-mpanoratra ahy tao amin'ny bilaogy linux, na dia tsy naseho voalohany teto aza aho fa tao amin'ny bilaogin'i frannoe, izay nantsoina hoe Ubuntu Cosillas ary ankehitriny dia LMDE Cosillas. Ary teo ny 2 martsa raha nanoratra ny toko voalohany amin'ity saga firmware ity aho izay notohizako teto. Tiako ny misaotra an'ireo rehetra mamaky ahy sy mamaky ahy, indrindra fa i Frannoe sy ny mpiasan'ny Desdelinux rehetra nanamboatra toerana ho ahy. Raha tsy noho ny nahavita io fampianarana Advanced Functional Programming io, sy mpiara-miasa iray izay nanoro hevitra ahy hampiasa linux hiara-miasa amin'ny ghc, dia azo antoka fa mbola hanafatra kôkômbra 3 amin'ny linux rehetra aho.
Hofaranako ity fehezanteny ity: "Raha tsy mikiakiaka amin'ny tsy fahalalanao ianao dia tsy hisy hivoaka hanitsy anao ary noho izany dia ho diso ianao raha diso"
Lahatsoratra mifandraika amin'ny lisitra mailaky ny kernel:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Firmware, ny nofy ratsy Fizarana 4: Fifaninanana famonoana akoho
Ny olana dia raha ny mpanamboatra Notebook sy ny hafa dia ao ambadiky ny UEFI an'i Wintel (tsy tokony hadinontsika fa ny UEFI no hevitr'i Intel), ary, amin'ny tranga ratsy indrindra, dia nanapa-kevitra ny tsy hampiditra ny safidy hampiatoana azy izy ireo, Ho lasa mainty ny distro Linux raha tsy manana sonia izy ireo, ary heveriko fa zavatra tsikaritry ny olona ao amin'ny RedHat. Te hahita izay hataon'izy ireo aho ao anatin'ny roa taona, rehefa tsy afaka apetraka amin'ny solosaina vaovao ny Linux satria tsy manana sonia.
Amin'ny tranga ratsy indrindra, ny fizarana dia hanao sonia ny kernel miaraka amin'ireo fanalahidy nosoniavin'i Microsoft. Raha ny marina dia izany no efa ataon'ny maro.
Ny lazain'i Torvalds dia mila voavaha amin'ny distro tsirairay io, satria tsy hanao izany ny kernel. Ary ity no zavatra tena misy saina, tsy misy fiverenana.
Linus no tena toetrako eto amin'izao tontolo izao. Toy ny nesorina tamin'ny sarimihetsika Quentin Tarantino izy ary napetraka hitarika vondrom-piarahamonina. Tena marina ny lazainao.
Ahoana ny amin'ny masinina LinuxMint, miaraka amin'ny booty UEFI / Secure ve izy ireo? Misisika aho fa rehefa mila iray dia hividy iray amin'ireo.
Herintaona ny lapako, amin'ny fotoana ilako hafa dia heveriko fa ny zavatra UEFI / Secure boot dia efa voavaha tsara, na ampiharina tsara, na esorina ara-dalàna, ha.
Tena miahiahy azy aho, tsy azo atao izany satria na dia natao hampiasaina amin'ny linuxmint, fedora, ubuntu ary debian aza ny mintbox, araka ny voalaza ao amin'ny filazalazana azy dia hadalana ny mametraka boot azo antoka amin'ny zavatra azo antoka fa hanana dualboot, na natao ho an'ny rindrambaiko maimaimpoana na maimaim-poana amin'ny tranga Ubuntu XD.
Ity dia olana iray izay niteraka resabe hatrany hatramin'ny nivoahany. Mahaliana ny mahita ny fivoarany ary amin'ny maha Alf azy, heveriko fa amin'ny fotoana fohy dia hihatsara ny raharaha. Misy ireo mpanamboatra izay hamela hatrany ny famonoana ny boot azo antoka sy ny hafa izay efa manana Linux efa napetraka mialoha toy ny ThinkPenguin na System76, manantena aho fa rehefa mandeha ny fotoana dia mihamaro ny olona hateraka hanana safidy ... Aleoko foana hividy zavatra mifanaraka 100% amin'ny linux azo antoka hilalao azy ireo amin'ny milina hafa.
Mbola tsy azoko tsara ny shenanigans ireto UEFI sy ny hafa .. Shit .. by the way diazepan: Arahabaina! Ho anay dia mahafinaritra ny manana anao eto.
Amin'ny farany dia hiafara amin'ny fividianana fitaovana mpizara madio isika, izany dia raha tsy entin'izy ireo any io.
Tokony ho olona lehibe iray izany fa ny ankamaroan'ny mpizara lehibe sy manakiana dia miara-miasa amin'ny Linux ary maro amin'izy ireo (miankina amin'ny fikirakirany) dia azo antoka, toy ny mihevitra fa hamono an'io rindrambaiko mamoa fady io io fitarihana fiarovana io.
Araka ny mahazatra dia MAIKA tanteraka amin'izay apetrak'i Linus aho, araka ny nolazainy tsara, ity lohahevitra UEFI ity dia momba ny "fifehezana" fa tsy "filaminana." Ho ahy dia tsy matoky an'ity rafitra fiarovana ity mihitsy aho ary raha misy solosaina misy UEFI eo am-pelatanako, ny zavatra voalohany hataoko dia ny famonoana azy ary hitohy toy ny teo aloha. Etsy ankilany, tsy mino aho fa ny mpanamboatra fitaovana dia hisoroka ny famonoana ny UEFI satria mety hiteraka fatiantoka amin'ny tsena izy ireo; fa hisy olona mety hanao risika na farafaharatsiny manao izany amin'ny maodely manokana, tsy miahanahana aho, fa mieritreritra aho fa hisy foana ny vahaolana, tadidio fa tsy inona io fa ny BIOS amin'ny steroid ary ny mety hanatsarana miaraka amina kinova "misokatra" foana izy io.
Raha ny fahalalako azy dia tsy miasa afa-tsy amin'ny win8 ny eufi raha mila rafitra boot roa ianao satria azonao atao ny manafoana azy amin'ny biôs, tsy misy dikany raha manana linux fotsiny ianao ary manafoana io safidy io avy amin'ny biolo ary tsy mila be korontana momba ilay olana. .
Fabri dia hoy izy:
Somary lehibe ho ahy io lohahevitra io, saingy tamin'ny fanesorana manokana no hitako dia nanomboka nahita azy ireo mainty ireo saribakoly Microsoft rehefa nahita ny fahamatoran'ny Linux…. Ary ny fomba nitondran'izy ireo ampihimamba ireo mpanamboatra lehibe hatramin'ny niandohan'ny fotoana, ho ahy dia mazava ny antony mahatonga ny olana be amin'izany booty azo antoka ...... na orinasa lehibe na salantsalany aza heveriko fa handray safidy hafa aho raha tsy manisa bebe kokoa ary any no hividianako ny masiniko manaraka ... azo antoka izany 😉
Valiny tamin'i Fabri
KDE mitovy endrika amin'ny Ubuntu